2 Timoti 4 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Tsamba Yechipiri Kuna Timoti 4:1-22
“Ita ushumiri hwako zvizere” (1-5)
Paridza shoko uchiita zvekukurumidza (2)
“Ndarwa kurwa kwakanaka” (6-8)
Mashoko ekupedzisira (9-18)
Kwaziso yekupedzisira (19-22)
4 Pamberi paMwari naKristu Jesu, uyo achatonga+ vapenyu nevakafa+ paachazviratidza pachena+ uye paachauya muUmambo hwake,+ ndinokuudza zvakasimba kuti: 2 Paridza shoko;+ paridza uchiita zvekukurumidza panguva dzakanaka nedzakaoma; tsiura,+ rayira, kurudzira nemwoyo murefu neunyanzvi hwekudzidzisa.+ 3 Nekuti pachava nenguva yavasingazoteereri kudzidzisa kwakanaka,*+ asi maererano nezvido zvavo, vachazviunganidzira vadzidzisi kuti vafadze nzeve dzavo.*+ 4 Vacharamba kuteerera chokwadi vachida kunzwa ngano. 5 Asi iwe, ngwarira zvinhu zvese, tsungirira matambudziko,+ ita basa remuevhangeri,* ita ushumiri hwako zvizere.+ 6 Nekuti ndava kutodururwa semupiro wechinwiwa,+ uye nguva yangu yekusunungurwa+ yava pedyo. 7 Ndarwa kurwa kwakanaka,+ ndamhanya kusvika kumagumo,+ ndachengeta kutenda. 8 Kubvira iye zvino, ndakachengeterwa korona yekururama,+ iyo Ishe, mutongi akarurama,+ achandipa semubayiro pazuva iroro,+ asi kwete ini ndega, asiwo vamwe vese vakada kuratidzwa kwake pachena. 9 Ita zvese zvaunogona kuti ukurumidze kuuya kwandiri. 10 Nekuti Dhemasi+ akandisiya nekuti akada nyika ino,* uye akaenda kuTesaronika, Kresenzi akaenda kuGaratiya, Tito kuDharimatiya. 11 Ruka chete ndiye wandasara naye. Muuye mese naMako, nekuti anondibatsira muushumiri. 12 Asi ndatuma Tikiko+ kuEfeso. 13 Paunouya, uuye nejasi randakasiya riina Kapo kuTroasi, nemabhuku,* kunyanya aya ematehwe. 14 Arekizanda mupfuri wemhangura akandiitira zvakaipa chaizvo. Jehovha* achamutsiva zvinoenderana nezvaakaita.+ 15 Newewo unofanira kumungwarira, nekuti akapikisa mashoko edu zvakasimba. 16 Pandakatongwa kekutanga hapana akanditsigira, asi vese vakandisiya; ngavarege havo kupiwa mhosva. 17 Asi Ishe akamira pedyo neni akandipa simba, kuti kuburikidza neni kuparidza kunyatsoitwa uye kunzwike nemarudzi ese;+ uye ndakanunurwa pamuromo weshumba.+ 18 Ishe achandinunura pamabasa ese akaipa uye achandiponesa nekuda kweUmambo hwake hwekudenga.+ Ngaakudzwe nariini nariini. Ameni. 19 Ndikwazisirewo Priska naAkwira+ neimba yaOnesiforasi.+ 20 Erasto+ akasara kuKorinde, asi ndakasiya Trofimo+ kuMireto achirwara. 21 Edza nepaunogona napo kusvika chando chisati chatanga. Uri kukwaziswa naYubhuro, naPudhenzi, naRino, naKraudhiya, nehama dzese. 22 Ishe ngaave nemafungiro aunoratidza. Nyasha dzake ngadzive nemi.
^ Kana kuti “kunopa utano; kunobatsira.”
^ Kana kuti “vavaudze zvavanoda kunzwa.”
^ Kana kuti “ramba uchiparidza mashoko akanaka.”
^ Kana kuti “mamiriro ezvinhu epanguva ino.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
^ Kana kuti “nemagwaro.” Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Gwaro.”